Google AdWords | Zonke izixhobo ozifunayo!
Google AdWords : Onke amaphulo abaxhasi akho aphantsi kolawulo
Ngezi Google Ads zezixhobo zeArhente uya konga ixesha ukuze ukwazi ukugxila kwezona zinto zibaluleke kakhulu: abathengi bakho.
Imisebenzi engcono kwiimeko-apps iqela ezijoliswe
Fumana izaziso kunye neengxelo ngexesha ngokwenene ukusebenza iphulo abaxhasi bakho.
Yaziswa malunga neyona nto ibaluleke kakhulu Google AdWords
Cwangcisa kwaye wenze ngokwakho notifications ukwazi xa uguquko luyehla okanye xa ufuna ukunyusa inkcitho
Yongeza Slack Faka Teams Yongeza Google Chat
Oluzenzekelayo Smart IiNgxelo nyanga zonke
monthly reports ezinzulu zenyanga ezibonisa kakuhle iimetrikhi kunye nokukhula kwemikhankaso yabathengi bakho.
Yonke idatha ngonqakrazo olunye Google Sheets
Sukuchitha ixesha lesibini ekuqokeleleni iimetrikhi zabaxhasi bakho. Ngokulula kwaye ngokukhawuleza add them to a Google Sheet.
Umxokozelo Google Sheet add-on
Ukuphucula ukusebenza iphulo abaxhasi bakho
Qulunqa yonke idatha Google Sheets , yenza ngokwakho izilumkiso zokusebenza njengoko kufuneka, kwaye ufumane iiNgxelo zeSmart zenyanga ezinokuthi zithunyelwe kubaxhasi bakho.
Umxokozelo Google Sheet add-on Yongeza Slack Faka Teams Yongeza Google Chat
Okungakumbi malunga Google AdWords zeArhente
Funda nzulu ngezixhobo zethu ezenzelwe Google AdWords yee-arhente nayo yonke into esingakunikeza yona kunye neshishini lakho.
Oko sikunikezayo wena arhente yakho zentengiso
Iimpawu, izibonelelo kunye noncedo
Izixhobo zethu ziyilelwe ukuphucula Google AdWords se-arhente kwaye ziyilelwe liqela Clever Ads ukwenza ubomi bakho bube lula kwaye ikunike ulawulo olupheleleyo, ngalo lonke ixesha naphi na apho ufuna khona, kwimikhankaso yakho nakwabaxhasi bakho .
Ngaba ufuna ukuba onke amaphulo akho aphuculwe, afike ngoku, kwaye ngqo Google chat yakho yeGoogle? Konke oku nokunye okuninzi esinokukunika kona, konke kuyilelwe ukukuxelela into oyifunayo ukuphucula imikhankaso yabathengi bakho ukuze ufumane iziphumo ezilungileyo.
Siqinisekisa ukuba AdWords ilungileyo yokudityaniswa kweearhente, fumana okungakumbi!
Ukonga ixesha, imali kunye nezibonelelo!
Izixhobo zethu Google Ads ziyilelwe ukugcina imali, izixhobo, kwaye okona kubalulekileyo .... Ixesha!
Yethu Slack , Microsoft Teams nokuhlanganisa, Google Chat bot , Google Spre ads heets Dibanisa-on, kwaye yethu Google Ads indalo phulo, ifoun nokulayisha, uya kukwazi ukuchitha ixesha lakho elixabisekileyo koko, kubaluleke kakhulu: abathengi zenu, kwaye usenalo ixesha eliseleyo ukonwabela loo kofu yakusasa uyithandayo!
Khangela awona mathuba aphezulu oshishino, yenza eyona mikhankaso ilungileyo, fumana izaziso ezibaluleke kakhulu ukunqanda iziphazamiso ezingeyomfuneko, ukufumana iingxelo zenyanga, njl.njl. Ngamafutshane, izixhobo ezijolise AdWords ixesha lokujonga kwezona zinto zibalulekileyo.
Into onokuyenza izixhobo zethu
Iingxelo zenyanga zichazwe format PDF ukuba ngokugqibeleleyo bonisa metric kunye nokukhula namaphulo abaxhamli bakho. Gxininisa data ukuba izinto kuwe, uze ulinganise kuphela yintoni ebalulekileyo ukuze ukwazi ukugcina ixesha ekuphicothweni ngaphandle kokulahlekelwa iinkcukacha zezona zinto zibalulekileyo kwaye wenze azisiwe, izigqibo data eqhutywa.
Ukuguqulwa kweFanele, amagama aphambili ... Yonke into ofuna ukuyazi kwiingxelo ezenzelwe wena. Lonke ulwazi oludingayo, kunye nendlela yokulusebenzisa. Lungiselela amaphulo akho kunye namaphulo abathengi bakho asekwe ekusebenzeni, ngokusebenzisa iingcebiso ezilungele ukusetyenziswa kunye neengcebiso eziyilelwe ngokukodwa Google Adwords zearhente.
Imisebenzi engcono kwiimeko-apps iqela-based
Fumana izaziso zexesha langempela kunye neengxelo ekusebenzeni kwephulo labathengi bakho. Xa sithetha AdWords , kuya kufuneka sithathele ingqalelo ukuba sesiphi isixhobo esisisebenzisayo kwaye sifuna ukuthatha ithuba lokufumana izaziso kunye neengxelo zemikhankaso yethu. Usebenzisa ntoni kwiarhente yakho? Ngesixhobo sethu uya kuba nakho ukudibanisa Google Ads kunye nesinye sezixhobo ezithandwayo zokuncokola zamaqela kwihlabathi Slack : Slack, Microsoft Teams okanye Google Chat . Khetha kwaye wandise ukusebenza kwemikhankaso yabathengi bakho ngedatha!
Waziswe ngezinto ezibaluleke kakhulu kuphela
Qwalasela kwaye wenze ngokwezifiso izaziso zakho ukwazi yonke into eyenzekayo kwimikhankaso yakho kunye neyabaxhasi bakho. Umzekelo, ukuba ufuna ukwazi xa uguquko luyehla okanye xa inkcitho yephulo ifuna ukwanda, setha esinye sezaziso zethu kwaye siya kukwazisa kwisicelo sonxibelelwano osikhethileyo! ( Slack , Microsoft Teams okanye Google Chat ).
Le ndlela, uya kuba lowo ukubonisa yeyiphi parameters ofuna phambili, apho ulwazi ofuna ukufumana, yaye zeziphi iziganeko ziya kuqwalaselwa uyinqaba kunye nemfuneko ukuba kuboniswe kuwe ukuze zihlale zinolwazi ngazo ezo mathuba kakhulu / data .
Ke ukuba akukho nto iya kuqatshelwa kwaye imikhankaso yabathengi bakho ihlala iphezulu! Google Ads khange kube lula.
Sukuchitha enye yesibini ngesandla ukuqokelela iimeta kunye nedatha yomkhankaso kubathengi bakho. Yongeza ngokulula kwaye ngokukhawuleza kwiphepha likaGoogle. Google Ads zearhente ngokufanelekileyo, zisebenzisa izixhobo ezinikezwe nguGoogle kunye nezinye iiapps ezaziwayo osele uzisebenzisa kwiarhente yakho.
Google Sheets sesinye sezixhobo ezisetyenziswa kwihlabathi liphela kuwo onke amashishini ukulungiselela amaxwebhu kunye namaqela? Ukuba uyayisebenzisa, ungazilungiselela iinkqubo zakho kwaye uyilungiselele yonke idatha yakho kwiDrayivu yakho. Ayinakuba lula!
Yintoni eyenza lo mahluko?
Kutheni usebenzisa izixhobo zethu Google AdWords ?
Clever Ads siyazingca ngokuba yinxalenye yeNkqubo yeNkulumbuso yamaQabane kaGoogle, esiqinisekisa ngayo ukuba inkqubo ikhuselekile nge-100% kwaye siyathembisa ukuba siyayihlonipha idatha yakho yabucala kunye nabaxumi bakho. Ngaphezulu kwamashishini angama-150,000 kunye neenkampani zisebenze nathi kwaye zasithembela ekunyuseni Google Ads kunye nokusebenza, ngeziphumo ezigqwesileyo. Awuyi kuzisola, eyona ndlela ingabizi kakhulu (esimahla) yokwandisa Google Ads .
Ngezixhobo zethu kunye nobungcali siye sakwazi ukuguqula into enzima kunye nexesha elininzi libe yinto elula nekhawulezayo. Unokufumana AdWords ezimnandi nathi! Uyakwazi "ukudlala" ngeengxelo zethu kunye neengcebiso zokufezekisa ubuninzi be-ROI (Buyisela kuTyalo-mali) kunye nenqaku eliphezulu ngaphandle kokuqonda, ngalo lonke ixesha ufunda!
Guqula iarhente yakho ibe yiarhente yesalathiso Google Ads bulumko kunye namava kule nkqubo kunye Clever Ads . Sisoloko siyazi into emasiyenze ngokulandelayo, ungasithemba ukuba uthathe amanyathelo okuqala okanye alandelayo.
Siyakholelwa ukuba naliphi na iarhente yabo nabuphi na ubungakanani kunye nohlahlo-lwabiwo mali kufuneka babe nakho ukufikelela kwintengiso zikaGoogle, ke Google Ads eziza kukuvumela ukuba ukhuphisane kwinqanaba lokudlala kunye neearhente ezinkulu, ezinamava ezinentengiso enkulu. uhlahlo-lwabiwo mali.
Izizathu zokuba kutheni ungafuna ukusebenzisa izixhobo zethu zinokwahluka, nokuba ukrokrela ukuba Google Ads angenza ngcono, nokuba ufuna ukukhangela ukuba iarhente yakho yentengiso isenza eyona nto ingcono, okanye mhlawumbi ndinomdla wokwazi ukuba ukusebenza kwabo nzima kunomvuzo? Clever Ads AdWords kuba arhente na ngesuti yakho lwezixhobo.
Ukongeza, iqela lethu leengcali lihlala likulungele ukukunceda, kwaye ungasoloko uqhagamshelana nabo ngayo nayiphi na imibuzo, inkxalabo, iingcebiso okanye uncedo oludingayo ku @ @ cleverads .com nantoni na oyifunayo kunye nearhente yakho.
Integrated Suite of Izixhobo
Enye inzuzo okanye inzuzo ngokusebenzisa zethu AdWords izixhobo ze Clever Ads arhente kukuba uyakwazi ukungena yonke into ukusuka yakho Clever Ads panel yokulawula, kwaye uyakwazi ukudibanisa amandla Google Ads yonke lula lokuphatha Clever Ads ikunikeza. Zonke iingxelo zethu, izilumkiso, iingcebiso ziya kukunceda ukuba wenze Google Ads ezenzelwe abathengi bakho, ukuba uhlale unolwazi ngee-algorithms zikaGoogle ezintsha, ulwandiso lwephulo, njl njl.njl. ukulungelelanisa izimvo zamagama aphambili, phakathi kwezinye izinto. Iseti yethu in-in eyodwa Google Ads ezikhethekileyo zezixhobo zeArhente zikulungele ukwenza wonke umsebenzi onzima ngelixa uchitha ixesha lakho usenza eyona nto uyenzayo: ukuqhuba nokulawula ishishini lakho nokwenza ulonwabo kubathengi bakho.
apps Team-based kunxibelelwano
Dibanisa Google Ads Slack , Microsoft Teams , okanye Google Chat
Qwalasela izilumkiso zakho zesiko zokufumana ixesha elinye okanye iingxelo zeveki zokufumana iimetriki ngengxoxo kunye nokufumana iigrafu kunye neemetriki ezinxulumene nokusebenza kweakhawunti yomthengi wakho. Google AdWords zearhente zilula ngokudityaniswa kwengxoxo enje!
Yenza Google Ads zakho zikaGoogle zenziwe ngokuzenzekelayo zasimahla.
Fumana okokugqibela ukuphuma kwimikhankaso ads Clever Google Ads Audit kunye nokomeleza intengiso yakho kuGoogle ukusebenza kancinci.
Umguquleli Google Ads
Musa ukubeka imida ishishini lakho. Advertise naphi ufuna! Guqulela zonke kwiilwimi ezininzi.
Hluza iziphumo zakho uze ufumanise amathuba ogqibeleleyo imikhankaso yakho.
Iimveliso ezininzi Clever Ads
Zonke izixhobo kufuneka kwandiswe imikhankaso yedijithali abaxhasi bakho.